မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်မှု နည်း၊ ဆုတ်ယုတ်မှု များ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Facebook ဟာ မြန်မာတွေအတွက် ပဋိပက္ခဖန်တီးတဲ့ လှုံ့ဆော်ရာ ပင်မတစ်ခုလား
ကြွက်ထောင်ချောက် နှင့်နိုင်ငံအန္တရာယ် »
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး အမုန်းစကားတွေ အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှာ ပြောဆိုနေကြတဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက အရပ် ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူတွဲပြီး တုန့်ပြန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အစီရင် ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ အထူးထောက်ပြထားတာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်က လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြားကို လွှတ်ပေးခဲ့တာ၊ အကျဉ်းထောင်အခြေအနေတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်တာ၊ ရေရှည်ခံတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရဖို့ ဆက်လုပ်နေတာတွေအပါအ၀င် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ရလာခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေ တစုံလုံးဟာ ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် သက်ရောက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဗဟိုနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရတွေက လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေကို အပြင်းအထန် ကန့်သတ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရဲ့ အရင်းခံအကြောင်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ မလုပ်သလောက်ပဲလို့ အစီရင် ခံစာကထောက်ပြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံမဲ့ မူစလင်လူနည်းစုတွေကို တန်းတူညီမျှ ခွဲခြား မှုမရှိတဲ့ အပြည့်အ၀နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးဖို့ မျှတတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုကို အစိုးရက ချမထားဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေနဲ့ နိုင်ငံတ၀န်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တခြား လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာတွေ ဆက်ရှိနေ တုန်းပဲလို့လဲ အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မုဒိန်းကျင့်တာနဲ့ လိင်ပိုင်း အကြမ်းဖက်တာ၊ နိုင်ငံရေးပယောဂပါတဲ့ ဖမ်းဆီး တာတွေလုပ်တာ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အားနည်းတာကြောင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ နစ်နာကြေးပေးတာ မျိုး ဒါမှမဟုတ် တရားဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာမျိုး မရှိဘဲ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာ၊ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ဖမ်းဆီးတာ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်တာ တွေ ပါဝင်တယ်လို့ အသေးစိတ် ထောက်ပြထားပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေက အရပ်သားတွေကို အာဏာပိုင်တွေက အကာအကွယ်မပေးဘူးလို့လဲ ပြောပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်၊ ဘာသာရေးကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာတာပေါ် ကန့်သတ်တာတွေ ဆက်ရှိနေပြီး အာဏာပိုင်တွေက ဆက်ပြီး ဖိနှိပ် ချုပ်ခြယ်နေတုန်းပဲလို့လဲ အစီရင်ခံစာမှာပြောထားပါတယ်။
လူမျိုးစုနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူနည်းစုတွေ၊ နိုင်ငံမဲ့သူတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ ဆက်ဖြစ်နေသလို လူမှောင်ခိုကူးတာလဲ ရှိနေတုန်းပဲလို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ကလေးတွေအပါအ၀င် အတင်းအဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေတာတွေက အရင်တုန်းကထက် နည်းသွားပေ မဲ့ ဆက်ရှိနေတုန်းပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူတာ ဒါမှမဟုတ် အပြစ်ပေးတာတချို့ကို အစိုးရက အကန့် အသတ်နဲ့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ အပြစ်ပေးအရေးယူ မခံရဘဲ ကင်းလွတ်နေတုန်းပဲလို့လဲ ပြောထားပါတယ်။
လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ဟာလဲ လူကြီးနဲ့ကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေတာ၊ ကလေးစစ်သား စုဆောင်း တာနဲ့ ပဋိပကဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်တာတွေအပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲတာတွေရှိတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
This entry was posted on June 27, 2015 at 3:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.